I-Statmux Manje Isitholakala Ku-AWS Elemental MediaLive | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » I-Statmux Manje Isitholakala ku-AWS Elemental MediaLive
Njengendlela Ama-Web Web Services inkampani, I-AWS Elemental MediaLive ihlanganisa ubuchwepheshe bevidiyo obujulile namandla nesilinganiso sefu ukunikeza abasebenzisi nge-software engasukeli / eguquguqukayo esekelwe kwisoftware kanye nezisombululo zokulethwa. I-AWS Elemental MediaLive ivumela amakhasimende ukuthi abambe ngokwanele ukuqina kwefu lapho kudingekile ngenkani nangokhokha njengoba uya nezinsizakalo.
I-AWS Elemental MediaLive Manje Ukunikeza I-Statmux
I-Statistical Multiplexing (Statmux) isiyatholakala nge I-AWS Elemental MediaLive, futhi lobu buchwepheshe buthile busetshenziswa ekusakazweni kokuhamba komsebenzi okwaba ama-bits ngesikhathi sangempela phakathi kweziteshi eziningi zevidiyo ezibukhoma. Into enhle mayelana Isimo ukuthi ikhulisa ukusebenza kahle kwenethiwekhi ngokwenza kahle ikhwalithi yesithombe yeqembu leziteshi ngaphakathi kwe-bandwidth ephelele. Kusetshenziswa I-AWS Elemental MediaLive nge-Statmux ivumela amakhasimende ukuthi aphathe ukucutshungulwa kwamavidiyo alayini kanye nokudlala ku Ifu le-AWS yokusakaza, ikhebula, noma ukusatshalaliswa komhlaba.
Izinkampani zemidiya, njengabasakazo bezwe lonke, zivela kokuqukethwe bukhoma futhi ngasikhathi sinye babelane ngalokho okuqukethwe nabalingani babo bokuhambisa. Ngokwesiko, lokhu kufezwe ngokulungiselela iziteshi zokusatshalaliswa kusetshenziselwa ukufakwa kwesikhombi sombhalo esakhiweni. Lezi zinhlelo zingathatha izinyanga ukuthenga nokuhlela. Zidinga ubunjiniyela obukhulu ukuze busebenze ngokuthembekile, futhi azikwazi ukuphindwaphindwa uma sekudilizwe. Ngoba i-AWS Elemental MediaLive manje ine-Statmux, abasakazeli kanye nabahlinzeki bokuqukethwe bangakha futhi baphathe ukuhanjiswa kwevidiyo yokusakaza ezinsizeni ezilawulwa ngokuphelele ze-AWS, ezibanika amandla amaningi okuguquguqukayo, ngenkathi futhi kunciphisa izindleko ze-Hardware / management, futhi zilethe ikhwalithi yesithombe enhle kakhulu eyakhiwe -kwethembekile.
I-AWS Elemental MediaLive Nezinzuzo ze-Statmux
Izinzuzo ezibalulekile ze-AWS Elemental MediaLive nge-Statmux zifaka izici ezifana.
Ukuhlala okwakhelwe ngaphakathi
Ikhwalithi ephezulu yevidiyo
Ukuguquguquka kwamafu: Ivumela umsebenzisi ukuthi angeze, asuse, noma abukeze iziteshi ezibukhoma ezisuselwa ekuguqukeni kwezilaleli nezidingo zebhizinisi. Iphinde yethula ama-codecs amasha, ibeka izinsiza ngokubeka phambili esiteshini ngasinye, futhi ivumela umsebenzisi ukuthi asebenzise ama-codecs amaningi nezinqumo.
Ukuqina okwakhelwe ngaphakathi: Ivumela izinsiza ukuthi zabelwe ngokuzenzakalela kuzo zonke izindawo ezitholakalayo zokutholakala okuphezulu kanye nesibalo esilawulwa ngokuphelele.
Ikhwalithi ephezulu yevidiyo: I-AWS Elemental MediaLive nge-Statmux ivumela umsebenzisi ukuba andise ikhwalithi yakhe yevidiyo ngenkathi enza kahle ukuthi ilungiswe satellite noma i-bandwidth yokusabalalisa ikhebula. Abasebenzisi bangaphinde bahlele izilungiselelo zekhwalithi ngesiteshi ngasinye ngaphandle kokuphazamiseka ukuqiniseka ukuthi iziteshi ezibaluleke kakhulu zigcina ikhwalithi ephezulu kakhulu.
Ukusebenza kahle: Isiza ukwakha imithwalo yokusakaza yokusakaza endabeni yemizuzu. Lo msebenzi wenziwa ngaphandle kwama-hardware ezakhiweni, futhi ivumela ukulethwa kweziteshi ngokuphumelelayo ngaphezulu kwe-bandwidth yenethiwekhi engaguquki.
Ukuqapha Nama-metric: Ukuqapha okuhlanganisiwe kwe-Amazon CloudWatch kunika amandla ukubukwa kwesikhathi sangempela kwamamethrikhi wevidiyo nokusebenza kwe-multiplexer.
Isihloko Esihlanganisiwe: Ukuba nohlelo olulodwa olungaphatha konke ukufakwa ekhompyutheni kungalula kakhulu ukusebenza. Yilapho izihloko ezihlanganisiwe zingena khona esithombeni, futhi lokhu kungenxa yokuthi nge-Statmux ye-AWS Elemental MediaLive, kungasiza abahlinzeki bokuqukethwe ngokusatshalaliswa kwevidiyo yokusakazwa kwendabuko kanye nevidiyo eqondile yemisakazo ngobuningi bendawo.
Izinsizakalo Zemidiya ze-AWS ihlinzeka ngezinsizakalo zamafu ezivumela izinhlangano ezahlukahlukene, kufaka phakathi izinkampani zemidiya nezokuzijabulisa, amabhizinisi nezinhlangano zikahulumeni ukudala ukuqhutshwa kwevidiyo kusakazwa okuthe xaxa. Izinsizakalo zeMidiya ze-AWS zithunyelwa njengezakhi ngazinye / emabhulokhi okwakha ukugeleza kwevidiyo engapheli, okuyisisekelo esiza abahlinzeki bevidiyo bakhuphule ukuqhamuka nokuphendula kwezimakethe, ngenkathi bekhulisa ngokulinganayo izilangazelelo zokufinyelela / ukubandakanyeka kwezilaleli, futhi futhi kunciphisa izindleko zonke zobunikazi. Amanani wokukhokha njengoba uvumela umsebenzisi ukuthi andise ukucutshungulwa kwevidiyo namandla wesitoreji, isikhathi esisheshayo sokwenza imali, futhi aphathe kalula ama-spikes ekubukeni kokubuka ngaphandle kokutshalwa kwemali okuyimali.
Izixazululo ezivela I-AWS Elemental vumela umsakazo we-TV oyifisayo ne-multiscreen video eqanjwe futhi yenziwe ngemali emhlabeni wonke. Lokhu kunika abasebenzisi ikhono lokukala ngokomnotho futhi lenze imisebenzi yamavidiyo kanye nenkululeko yokugxila kulokho okubalulekile kumthamo olula kakhulu, yingakho kuguqula imibono eyingqayizivele ibe kokuqukethwe okuphoqayo okungakha amandla ababukeli.
Ubuchwepheshe be-AWS Elemental asize ekudaleni ukugeleza kwevidiyo okudala, kungasebenzi futhi kuvikeleke kuma-frogise wezindaba zomhlaba, opharetha be-TV, abahleli bohlelo lokuqukethwe, abasakazi, izinhlangano zikahulumeni kanye namakhasimende webhizinisi athembela kuwo. Thola ukuthi i-AWS Elemental yenza kanjani isipiliyoni semidiya futhi thintana namhlanje.
Ngeminye imininingwane yokuthi amakhasimende asindisa kanjani isikhathi, anciphisa ngaphezulu, andisa izinsiza zamafu ezingabizi kakhulu, futhi alondoloze ikhwalithi yesithombe eyenziwe kahle nge-AWS Elemental MediaLive ne-Statmux, bese ubheka aws.amazon.com/medialive/feature/statmux.
Ama-Web Web Services Ifu le-AWS I-AWS Elemental I-AWS Elemental MediaLive Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ukuguquguquka kwefu I-Cobalt Encoder I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Isimo Storage I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo 2019-12-01
Ngaphambilini: Ikhwalithi Yokuqinisekisa Ikhwalithi - Ukulethwa Kwevidiyo kwe-HLS
Olandelayo: Isikhungo Sokusebenza Kwenethiwekhi (NOC) Injini
Umhleli Womsizi Wasebusuku
Umkhiqizi we-Studio 5 Associate - Isikhathi Esiyingxenye
Umsebenzi weBhodi (Isikhathi Esithile)
Ingobo yomlando PA